Zavakanto ankehitriny : Hotanterahina eny Antsonjombe ny « Urban Heart » -
AccueilVaovao SamihafaZavakanto ankehitriny : Hotanterahina eny Antsonjombe ny « Urban Heart »
Zavakanto ankehitriny : Hotanterahina eny Antsonjombe ny « Urban Heart »
31/07/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Karakarain’ny sampana ara-kolontsaina ao amin’ny ivon-toerana ho an’ny kolontsaina alemana-malagasy na ny CGM. Hotanterahina eny Antsonjombe ny 10 aogositra izao ny hetsika ho an’ny zavakanto ankehitriny nampisalorana ny anarana hoe « Urban Heart ». Hetsika fanao isan-taona ho fampiroboroboana sy fampahafantarana ireo zavakanto ankehitriny eto Madagasikara. Araka izany dia tafiditra amin’ity hetsika ity ny fanehoana ny daholobe ireo hetsika ara-kolontsaina tsy vita na tsy azo tanterahina anaty efitrano.
Tanjon’ny hetsika araka izany ny fampivondronana sy famoriana ireo mpanakanto amin’ny sehatra samihafa voafaritra ny zavakanto ankehitriny amin’ny toerana iray tsy lavitry ny renivohitra. Hisongadina ao anatin’ity « Urban Heart » ity araka izany ireo karazana kolontsaina samihafa toy ny mozika, ny dihy, ny feo mozika atoan’ny olombelona (humanbeat-box) … Handray anjara ary hitondra ny talentany ao anatin’ny hetsika ireo mpanakanto maromaro to an-dry Raboussa, Jneto sy Laza, Tax, Ranala, Epistolier, Benson, SFLK, ary indrindra ilay tera-tany alemana vahin’ny hetsika Raphael Hillebrand… Tsy afa-misara amin’ny kolontsaina an-tanàn-dehibe ireo fanantanjahantena samihafa. Hanana ny anjara toerana ihany koa ara izany ireo fanatanjahantena mikorisa toy ny skate, rolleur… ary ireo fihanihana ireo rindrina na tamboho samihafa na ny Parkour.
Ankoatra ny fampisehoana dia asain’ny mpikarakara manokana amin’ny seho ny tanora. Tafiditra ao anatin’ny hetsika rahateo ny resaka fanabeazana ary mandritra izany no hitondrana famelabelarana mba ahafantaran’ny tanora ny tantaran’ny kolontsaina an-tanàn-dehibe, ary indrindra ny zava-misy manodidina izany.
Tsy mba afaka ny hiaina ao anaty filaminana mihitsy ve ny malagasy madinika fa izay tian’ny mpanao politika hitondrana ny fiainany no tsy maintsy arahiny ? Rehefa tian-dRavalomanana Marc akorontana ve ny fiainanan’ny malagasy dia tsy ...Tohiny
Fandriana, Fianarantsoa ary Toliara : Miandrandra an-dRavalomanana ho filoha